Iingcebiso ezivela kwi-Semalt On Indlela yokukhusela ukuThuthwa koThutho olungabonakaliyo
Iingcali ze-Semalt Iinkonzo zeDivarti, uNik Chaykovskiy, zihambisa ulwazi olubalulekileyo malunga nendlela yokujamelana neendlela ezingafunekiyo zokuhanjiswa kweendlela kwintambo yelihlo.
Inkoliso kaninzi, sithola inani elikhulu le-imeyili kunye nemilayezo yoluntu kwimidiya yoluntu malunga neendlela ezingenanto kunye nezingafunekiyo. Makheke apha ndikuxelele ukuba olu hlobo lwezothutho luvela kwiwebhsayithi yegaxekile kwaye akukho nto enokuyenza ngayo. Endaweni yoko, iya kubonakalisa i-Google Analytics kwaye inokukhokelela i-Google ukukhubaza i-AdSense yakho. Yingakho ufanele ulahlekise i-fake kunye ne-non-real traffic ekuqaleni.
Kuzo zombini amashishini amancinci namakhulu, i-SEO ibalulekile njengoko iiwebhusayithi zazo azikwazi ukufumana iindawo ezilungileyo ngaphandle kwayo. Lapha ndilungiselele iingcebiso kunye nolwazi oluncedo malunga nalokhu:
Lahla zonke iindwendwe ezichukumisayo kunye ne-bots
Okokuqala, kufuneka ungabandakanyi zonke iindwendwe ezivela kwizigulane ezingaziwa kunye nebhodi. Oku kungenziwa ngokulungisa izicwangciso zakho kwisipaneli somlawuli. I-Google Analytics isinika iindawo ezininzi kunye nezihlunu zokukhetha. Baya kusenza sikhusele ukufika kwebhodi kunye nezigulane ezinobungozi kwiwebhusayithi yethu kunye nomntu wonke.
Ukwahlukana phakathi kweReferral Spam kunye ne-Ghost Spam
Kwinqanaba le nqaku, ndiza kunika abafundi bethu ngolwazi malunga nendlela yokwahlula phakathi kokuthunyelwa kogaxekile kunye ne-spam spam..Makheke apha ndikuxelele ukuba umoya ogaxekile uhlasela ngqo i-Google Analytics yakho. Kuyingozi kwi-Analytics yakho, ngelixa ukuthunyelwa kogaxekile kwenzeka xa iwebhusayithi yakho ihamba ngeendlela ezikhohlisayo, ukutyelela, ukuhlaselwa kunye nokukhushulwa. Kubaluleke kakhulu ukuyeka ukuthunyelwa kwe-spamming ngokukhawuleza. Ezinye zewebhusayithi zisebenzisa izihlungi zokumisa ugaxekile ukuba ungafiki kuzo. Unokuzilungelelanisa izicwangciso zakho kwaye udale inani lokuhlunga.
Njalo uvimbele ii-forum / iiwebhsayithi ezinqabileyo
Kubaluleke kakhulu ukuvimbela iiforam ezixakekayo kunye nazo zonke ezinye izinto zokuthunyelwa kogaxekile. Ngenxa yoko, kufuneka uhambe kwicandelo lomlawuli uze wenze izihlungi. Vimba ii-IP ezininzi kangako ukuze uqinisekise ukhuseleko lwakho kwi-intanethi. Ngoxa ukwenza njalo, kufuneka uqaphele njengoko ukubeka i-URL ngokuchanekileyo kubaluleke kakhulu. Ukuba kunjalo, ubeke i-URL engalunganga, mhlawumbi ulahlekelwa ukufikelela kwakho kwi-Google Analytics okanye uza kuvalwa kuyo kwiiveki ezimbalwa. Le ndlela iluncedo kuphela xa uvimba ukuthunyelwa kogaxekile kwinani elikhulu. Akukho nto enokuyenza ngayo ngeghost spam kwaye ayikwazi ukusebenza kunye nayo nayiphi na indleko.
Unokukhusela ii-URL ezininzi ngale ndlela. Vimba ulwimi logaxekile kwi-Google Analytics Kufuneka ukuba sivimbele ulwimi logaxekile kwi-Google Analytics. Kule nto, kufuneka ungene kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye ukhethe inketho yecebo lemifanekiso. Emva koko kufuneka ulungelelanise izilungiso zolwimi lwakho kwaye uklikha kwi-Go Go ukuze usebenze. Iifayile zidla ngokuthatha iiyure ezingamashumi amabini anesine ukuze zisebenze ngokuchanekileyo. Unokuqinisekisa ubungakanani befayile njengoko ufuna ngexesha eli xesha lidlule. Amanqaku angama-255 avunyelwe kwifayile yokucoca kwaye kufuneka afakwe kwi-spam yokuphepha. Ndiyathemba ukuba uye wakujabulela ukufunda le nqaku. Ngale macebiso, unokugcina kalula i-Google Analytics yakho igcina kwi-spam spam, engafanelekanga kunye neendlela ezingekho mthethweni Source .